ViraClean ViraClean GEL 500ML Hand Sanitiser 70% + Alcohol Rub KILLS 99.9% Germs & Viruses
I-New Range neFomula 99.99% Esebenzayo njengamanje ifomula entsha ihlolwe ngokuya nge-BS EN 1276: 2009 nangaphansi kokuhlolwa kwe-coronavirus kuya ku-BS EN 14476: 2013 + A2: 2019
I-Alcohol Hand Gel equkethe i-70% + Ethanol Alcohols.
Amanzi ahlanganiswe ku-ethanol anciphisa isikhathi sokumisa, adala isikhathi eside sokuxhumana. U-Ethanol udinga ukuba nesikhathi sokuxhumana okungenani semizuzwana eyi-10 ukubulala uStaphylococcus aureus noStreptococcus pyogene. Ngesikhathi sokumisa okwesibili kwe-min 10, i-ethanol iyabulala:
IsiNgisi / isiNtaliyane
Ezempilo nokuphepha / Khombisa u-E Sicurezza
I-BS EN 1040 (2005) Esebenzayo ngokumelene namagciwane ama-gram nama-gram ama-gram.Antiseptic to EN 1040 (2005). Ubulala amagciwane ku-European Standard.
Advocable esobala evikela ukuphepha kobuso isihlangu esingasindi sosayizi wepulasitiki
I-Official Fortnite Dancing Beach Towel 70 X 140Cm
Manje kuphela: Manje: £ 10.20